Antonio Conte oo weli ka go’an inuu lasoo wareego xiddig ka tirsan Barcelona – Gool FM
(Italy) 22 Agoosto 2019. Macalinka kooxda kubadda cagta Inter Milan ee Antonio Conte ayaa weli ka go’an inuu lasoo wareego xiddiga khadka dhexe kaga ciyaara Barcelona, kahor inta uusan xirmin suuqan xagaaga.
Sida laga soo xigtay wargeyska “Tuttosport” ee dalka Talyaaniga, tababare Antonio Conte ayaa wuxuu kalsooni ku qabaa in xiddiga reer Chile ee Arturo Vidal uu si weyn kaga caawin karo Nerazzurri loolanka ay ugu jirto xili ciyaareedkan tartamada kala duwan.
Wararka ka imaanaya gudaha Talyaaniga ayaa waxay sidoo kale tilmaameen, in Barcelona ay u baahan tahay inay iska iibiso Vidal hadii ay dooneyso inay soo afjarto heshiiska ay ku dooneyso Neymar Jr xagaagan, maadaama ay lacago u baahan tahay, kaddib markii ay dhawaan la soo saxiixdeen xiddigaha Griezmann iyo De Jong.
Inkastoo saraakiisha kooxda Inter Milan ay ka soo horjeedaan heshiiskan, hadana tababare Antonio Conte ayaa wali ku dhagan go’aankiisan, wuxuuna doonayaa inuu la soo wareego Vidan xagaagan, mana aqbali doono go’aan kale.
Jariirada maalinlaha ee ka soo baxda gobolka Catalonia ayaa xaqiijisay in Vidal uusan wax dan ah ka laheyn inuu ka tago Barcelona, isla markaana uusan xiiseyneynin kooxaha xiiseynaya adeegiisa.